17/02/2017 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Tafiditra amin’ireo hetsika fanaon’i Françis Turbo manodidina ny fetin’ny mpifankatia. Hanolotra ny «Atero – Poreto – Asio» izy anio alina sy ny alahady tolakandro izao etsy amin’ny CCEsca Antanimena. Hiverina kokoa amin’ireo hatsikana betsileo ny lehilahy amin’ity seho voalohany amin’ity taona ity. Ireo hatsikana nolalaovina tato anatin’ny taona vitsivitsy dia tsy hatao mandritra ny fampisehoana, misy kosa anefa ireo hetsika efa tany aloha no hiverenana amin’ny endrika vaovao. Ankoatra ny hatsikana dia mety hisy ny ampaham-potoana hitondrany ireo hira nahafantarana azy ary ansian’izany ilay hira kalon’ny fahiny nentina nampahafantarana ity fampisehoana ity. Fandikan’i Françis Turbo ny teny frantsay «interprétation» ny lohatenin’io fampisehoana io.
«Fehezam-pitiavana», io no lohatenin’ny seho tsy fahita firy ka hiarahan’i Samoëla sy ny Ikala Vazo anio alina manomboka amin’ny 8 ora etsy amin’ny Dôme Ankorondrano. Fotoana hitondran’ny roa tonta ireo hiram-pitiavana araka ny fahitan’ny tsirairay azy. Na dia misy manasokajy ao anatin’ireo mpanao vazo miteny aza dia manana ireo hira miresaka fitiavana mivaivay ihany koa i Samoëla izay efa voarakitra tamin’ireo rakikira navoaka. Santionany amin’ireny ny «Havako mamomamo», «Sexy girl», «Tandimerina», “Potika sy Love”… Nahafantarana an-dry Ry Kala Vazo hatramin’izay kosa ny fiangaliana ireo hirana mpanakanto hafa amin’ny endrika gasigasy miaraka amin’ny gitara, aponga ary ny valiha. Santionan’ireo hira nahafantarana azy telo vavy ireto ny “all about that bass”, “R’ikala”, “Bozy kely”…
Hisantatra ny fisehoana an-tsehatra voalohany amin’ity taona ity etsy amin’ny Piment Café Behoririka i Olombelo Ricky. Ny tontolon’ny fitiavana no hanokafana izany ao anatin’ilay seho “Tsy mifidy tontolo itiavako anao”. Mandritra izany no hikaloiny indray ireo hira efa nahafantarana azy sy tsy afaka am-bavan’ireo mpankafy raha tsy hitanisa afa-tsy ny “Taratra hazavana”, “Mbola zaza”, “Iny havako”… Na hibahan-toerana aza ny hira miresaka ny fitiavana eo amin’ny olon-droa dia hikalo vazo miresaka karazana fitiavana hafa ihany koa ity mpanakanto ity miaraka amin’ny ampongalavany.
Le Buffet du Jardin – Antaninarenina
Andriambavilanitra ao anatin’ny tontolon’ny jazz. Hihira ny tontolon’ny fitiavana i Joëlle Claude anio alina etsy amin’ny Le Buffet du jardin Antaninarenina. Ankoatra ireo hira efa voarakitra tao anatin’ilay rakikirany voalohany “Jazz-Joëlle Claude” dia hivelatra amin’ireo fiangaliana ny hiran’ireo mpanakanto hafa amin’ny endrika ahafantarana azy ihany koa i Joëlle Claude. Anisan’ireo hira nalaza efa nomeny endrika hafa sy jazz kokoa, ary miresaka ny fitiavana sy ny tontolony, ny “Miala tsiny” (Tiana), “Asakasakareo” (Ramaroson Wilson), “Lazao azy” (Rolly)… Ireo mpitendry kalaza no hanotrona azy amin’io fampisehoana io ahitana an-dry Samy Andriamanoro, Tahiry Andriamanoro, Do Andriambelo ary Naivo Andriambelo.
Espace Nambinintsoa – Talatamaty
Tsy fahitana matetika tato ho ato ny fiarahan’izy ireo. Hiara-dia amin’ny seho iray eny amin’ny espace Nambinintsoa Talatamaty anio alina i Ndondolah sy Lucia andaniny ary Melky kosa ankilany. “Tiana ianao iny”, lohatenin’ny hiran’izy ireo no natambatra ho lohatenin’ity fampisehoana tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny fetin’ny mpifankatia ity. Hibahan-toerana amin’ny anjara birikin’i Ndondolah sy Lucia ireo hira hiarahan’olon-droa ka anisan’izany ny “Tiana”, “Tsy fanah’iniako”, “Omeko tsy omeko”… Hanasongadina kosa ireo hira miresaka ny tontolon’ny fitiavana amin’ny ankapobeny kosa i Melky toa ny “Ianao iny”, “Ianao no tiako”…
Toa ny mahazatra azy, hifantoka kokoa amin’ny mozika mafana ny seho takariva atolotry ny Jao’s Pub eny Ambohipo isaka ny faran’ny herinandro toa izao. Ho an’ny anio dia “Double ambiance” no atolotra ny rehetra hiarahana amin’i Simonda Valera sy Jeffro Color. Mpanakanto roa samy manana ny hanitra ho azy ary hitondra seho roa samihafa ao anatin’ny takariva iray. Hibahan-toerana araka izany ireo mozika mafana nahafantarana an’i Simonda Valera toa ny “Sambatra”, “Tia namana”… Toa izany koa ireo sanganasan’i Jeffro Color : “Ataoko fomba” “Matoky anao zah”…
Art Gout – Talatamaty
Fotoana iray hiainana ao anatin’ireo hiram-pitiavana isan-karazany ny fetin’ny mpifankatia. Ny fahatsapana izany no nahatonga ny Sanda mozika hanolotra ny “Soirée Valentine” eny amin’ny Art-Gout Talatamaty anio alina manomboka amin’ny 9. Seho nampitondraina ny lohateny “Aime-moi comme je t’aime”, ka hikaloin’ny tarika ireo hiram-pitiavana nanana ny lazany isaka ny vanim-potoana, na ireo hira malagasy na ny hira vahiny.
Resto Lounge Ladobo – Ankorahotra
Mampiaraka ireo tsy nifankahita ny fetin’ny mpifankatia. Mpanakanto roa mbola tsy tafaraka teo amin’ny fampisehoana no nantsoin’ny Resto Lounge Labodo eny Ankorahotra hiara-dia amin’ny fampisehoana atolotr’izy ireo anio alina. Hitondra ireo hira miresaka fitiavana amin’ny endrika hafa kely i Mahatozo sy Liantsoa (tarika Isa roa telo). Fantatra teo amin’ny fitendrena ny vata maroafitsoka i Mahatozo ary hanotrona azy amin’ny feomangany kosa i Liantsoa.
Rehefa ela tsy tazana tamin’ny fampisehoana teto an-drenivohitra, hanafana indray ny sehatry ny Jao’s Pub eny Ambohipo rahampitso alina i Shyn. Mpanakanto fantatra amin’ny fitrandrahana ny gadona “rnb” izay ampiarahany amin’ireo tononkira matotra. Tsy ho diso anjara amin’ireo hira efa nahafantarana ity mpanakanto ity ireo mpankafy azy raha tsy hitanisa afa-tsy ny “Resim-pitia”, “Forever”, “Mahatsara zah”….
Tarika iray tsy mety mankaleo an’ireo mpankafy azy. Hisantatra ny seho fankalazana ny faha-45 taonany ny tarika Mahaleo amin’ilay fampisehoana « Isekely» etsy amin’ny Lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina, ny alahady izao manomboka amin’ny 3 ora tolakandro. Hizara telo amin’ny ankapobeny ny fampisehoana ka ireo hira vaovao sy mbola tsy fandre matetika no hisantatra ireo ampaham-potoana roa voalohany. Toa ny Mahazatra ; ireo hira efa hain’ny besinimaro kosa no hibahana ny ampaham-potoana betsaka ka hiarahan’izy dimy mirahalahy mikalo amin’ireo mpankafy ny hira rehetra. Hisy rahateo ny tononkira amin’ny fahitalavitra lehibe ahafahan’ny rehetra mikalo.